Coinbase amalite ikpeazụ ule nke Segwit - Blockchain News
Coinbase ka a mara ọkwa na Twitter na Bitcoin SegWit testing bụ na nke ikpeazụ ya n'ụzọ, na ga-abụ maka Bitcoin na izipụ na inweta na “esote izu ole na ole.” Ezubere nke a iji belata Bitcoin si ụgwọ na nyefe ugboro, na n'ihu belata ibu na ya na netwọk.
BTC: USD na abụọ na Coinbase si GDAX mgbanwe akụkọ ihe 5% nke bitcoin kwa trading olu, dị ka CoinMarketCap. Ozugbo ị tinye na ndị ọzọ na Coinbase ore BTC ọrụ, ọzọ ego abụọ na ndị ọzọ azụmahịa na ọ dị mma iche na a bukwanu òkè nke kwa ụbọchị azụmahịa eme site Coinbase / GDAX.
Dị ka ndị dị otú ahụ a na mmepe nwere ike feasibly nwere a na-achọpụta mmetụta na uwa Bitcoin azụmahịa ugboro ma na ụgwọ.
Previous Post:Na mba dị iche iche, bitcoin ahịa nwere ike ịdị iche
Next Post:Nanị anọ kaadị Exchanges irube isi chọrọ nke South Korean regulator